नेपाल आज | ओलीले प्रचण्डलाई भने–‘अब संगै नबसम !’
बिहिबार, ०६ कार्तिक २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
कर्णाली प्रदेशको पार्टीको विवादले उग्र रुप लिएको छ। प्रदेश पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टि प्रदेश सरकार हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच नै तथानाम भएको खवर वाहिर आएको छ ।
विवाद समधानका लागि कर्णाली प्रदेशका नेताहरुलाई काठमाण्डौं वोलाएका अध्यक्षद्वयले उनीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटेपछि आपसमा पनि छलफल गरेका थिए । सोहि विषयको जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले प्रेस नोट जारी गरे। तर सोहि दिन साँध प्रचण्डका प्रेस संयोजकले थापाको नोटलाई खण्डन गर्दै विज्ञप्तिा जारी गरेका थिए ।
प्रेस नोटका विषयमा कुरा गर्न ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरे। तर समस्या समाधानका लागि सहमति गर्ने भन्दा पनि दुवै जनाविच फोनमै चर्काचर्की भएको श्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि हालसम्म पनि दुई अध्यक्ष विच फोनमा कुराकानी हुन सकेको छैन।
फोन वार्तामा ओलीले ‘तपाईँले बिहान भएको सहमति खण्डन गर्न लगाउनु भएछ । किन त्यस्तो गर्नु भएको ?’ भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले ‘सहमति कहाँ भएको थियो ? तपाईँले एकतर्फी सहमति भन्दै किन सार्वजनिक गरेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि दुवैका विचमा फोनमै वाझावाझ भएको थियो ।
ओलीले, ‘मैले तपाईँलाई भनेको थिए त, यो यो गरौँ भनेर ।’ भनेपछि प्रचण्डले ‘तपाईँले भन्दैमा सहमति हुन्छ ? मैले पनि त्यहीँको पार्टी कमिटी र सरकारलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गरेको थिएँ त ।’ भनेका थिए ।
त्यसपछि ओलीले भने, ‘यस्तो तरिकाले कसरी हुन्छ ? यो राम्रो भएन ।’ प्रचण्डले फेरि भने, ‘यो तरिकाले हुँदैन । विधि, प्रक्रिया सबै कुरा नमान्ने ? यो तरिकाले हुँदैन ।’ यसरी कुरा वाझिन थालेपछि ओलीले ‘अब तपाईँसँग बस्नुको अर्थ छैन ।’ भनेको स्रोतको दावी छ।
यसपछि प्रचण्डले पनि ‘त्यहीँ हो, तपाईँसँग जति बसेपनि तपाईँको उद्देश्य नै राम्रो छैन ।’ भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
श्रोतले प्रचण्ड र ओलीको वार्तालाई यसरी सुनायो-
ओलीः ‘अब नबसौँ । तपाईँ र म अब भेटवार्ता पनि नगरौँ ।’
प्रचण्डः ‘कुनै अर्थ नै छैन । तपाईँको तरिकाले जनताबाट पार्टी टाढा भइसक्यो । नबसौँ ।’
प्रचण्डले यति भन्नासाथ ओलीले फोन काटेको श्रोतको भनाई छ। यहि झडपपछि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने भनेको अध्यक्षद्वयको भेटवार्ता पनि नभएको र दुई अध्यक्ष विच बोलचाल पनि बन्द भएको छ ।